အထူးကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူ |Skylark
ဖုန်း : +86 08385405559
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် သန့်ရှင်းရေးနှင့် စောင့်ရှောက်မှု
Professional High-Efficiency Chlorine Bleaching Powder ဝိုင်...
အထူးကောင်းမွန်သော Pe ဖြင့် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသော အဝတ်အစားများ
ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မီးဖိုချောင်သုံး ဓာတ်ငွေ့ရည်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဇီဝအင်ဇိုင်း Deodorizer Spray...
စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော Professional Pet De-Greaser
စွမ်းဆောင်ရည် အထူးကောင်းမွန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေအေးသန့်စင်ဆေး
Cold Water Detergent သည် ရေအေးဖြင့် တိုက်ရိုက်သန့်စင်နိုင်သော စက်မှုပိတ်ချောများကို သန့်စင်ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။၎င်းသည် ပျော့ပျောင်းသော အယ်ကာလိုင်းဆပ်ပြာဖြစ်ပြီး ပိတ်ချောကို ဘယ်တော့မှ မထိခိုက်စေပါ။ပိတ်စကို ဆေးကြောခြင်း၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပြီး ပိတ်စ၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေပြီး ရေနွေးငွေ့နှင့် ရေအသုံးပြုမှုကို သက်သာစေသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, လက်လီရောင်းချသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ21 နှစ် R&D ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် အထည်အ၀တ်လျှော်ပစ္စည်းများ။သင့်လိုအပ်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ Logo ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိရောက်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော၊ အရည်အသွေးမြင့်သော၊ စုစည်းထားသော ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်။
မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ရန်ဝမ်းမြောက်ပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မေးခွန်းများနှင့်အမိန့်စာများကိုပေးပို့ပါ။
စတော့နမူနာသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ရနိုင်သည်။
အဝတ်လျှော်စက်ရုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများနှင့် အခြားအ၀တ်လျှော်လုပ်ငန်းများတွင် အိပ်ယာခင်းများ၊ စောင်များ၊ ခေါင်းအုံးစွပ်များနှင့် အခြားအထည်များကို ဆေးကြောရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ကြမ်းတမ်းသော အညစ်အကြေးများ၊ အဆီအစွန်းများ၊ သွေးစွန်းထင်းမှုများကို ဖယ်ရှားပြီး အထည်ကို တောက်ပနေစေပါသည်။
OEM/ODM၊ လက်ကား၊ လက်လီ
အနံ့၊ သတ်မှတ်ချက်၊ အရောင်၊ ကွန်တိန်နာ၊ ထုပ်ပိုးမှု
Customize အတွက် MOQ
ရေအေးလျှော်ရည်တွင် အိုင်ယွန်တက်ကြွသောဒြပ်စင်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခိုင်မာသောအညစ်အကြေးများ၊ အဆီအစွန်းအထင်းများနှင့် သွေးစွန်းထင်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အထည်များကို တောက်ပနေစေနိုင်သည်။
ပင်မနည်းပညာခြောက်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်- ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ရေး၊ တည်ငြိမ်မှု ဖယ်ရှားရေး၊ ပျော့ပျောင်းတောက်ပသော အထည်များ၊ အမြှုပ်နည်းခြင်းနှင့် အရောင်ချွတ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ အကြွင်းအကျန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။၎င်းသည် ပျော့ညံ့သော အယ်ကာလိုင်း ဆပ်ပြာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိတ်ချောကို ဘယ်သောအခါမှ မထိခိုက်စေဘဲ၊ ပိတ်စ၏ ဆေးကြောမှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပိတ်စ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေမည်ဖြစ်သည်။၎င်းတွင် စုစည်းထားသော ဒြပ်ပေါင်း surfactants ကြွယ်ဝပြီး၊ ထိရောက်သော တက်ကြွသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်၊ ပိုမိုသန်မာသော ညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိပြီး အစွန်းအထင်းများ ပြိုကွဲမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးပါသည်။ပေါင်းထည့်ထားသော ပရိုတင်းဓာတ်သည် အထည်မျှင်များအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး နက်ရှိုင်းသော အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
1. ဤထုတ်ကုန်ကို အလိုအလျောက် ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ဖြင့် အလိုအလျောက် တင်ဆောင်နိုင်သည်။
2. ဤထုတ်ကုန်၏သောက်သုံးသောပမာဏသည် အစွန်းအထင်း၏အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်သည်-
100 ကီလိုဂရမ်/အဝတ်လျှော်စက်၏ ပမာဏအတွက် ကိုးကားချက်ဇယား
အစွန်းအထင်းဒီဂရီ ရည်ညွှန်းသောက်သုံးသော (ယူနစ်- g)
အရန်ပစ္စည်းများ ( ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ၊ emulsifier ၊ အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့် ၊ ကလိုရင်း အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့် ၊ စသည် ) ကို ဆေးကြောစဉ် အခြေအနေအရ ထည့်ပါ။
● ကလေးများ လက်လှမ်းမမီအောင် ထားပါ။မျက်လုံး သို့မဟုတ် အရေပြားနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ရေဖြင့် ဆေးကြောပြီး ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။မျိုချမိပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
● ခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင် ထားပါ။
မေး- ထုတ်ကုန်နှင့် ထုပ်ပိုးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကို ရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း OEM ပေးနိုင်ပါတယ်။မင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းလက်ရာကို ငါတို့အတွက်ပဲ ပေးလိုက်ပါ။
မေး- နမူနာအချို့ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A: အမိန့်မချမီ စမ်းသပ်မှုအတွက် အခမဲ့နမူနာများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်၊ ပို့ဆောင်ရေးစရိတ်အတွက်သာ ပေးချေပါ။
မေး- ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲ။
A: 30% T/T အပ်ငွေ၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ 70% T/T လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု။
Q: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်စက်ရုံက မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
A: ကျွန်တော်တို့မှာ တင်းကျပ်တယ်။အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကျွမ်းကျင်သူများသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံး၏ အသွင်အပြင်နှင့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးပါမည်။
ယခင်- စွမ်းဆောင်ရည် အထူးကောင်းမွန်သော Super Collar Cleaner
နောက်တစ်ခု: ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့် ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်
လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ပဈေးကွက်များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်ကို အားကြိုးမာန်တက် ချဲ့ထွင်လျက်ရှိသည်။လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းဆယ်ခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာရန်၊ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့် ကမ္ဘာကို ဝန်ဆောင်မှုပေးကာ သုံးစွဲသူများ ပိုမိုရရှိလာသည့် ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် ကတိပြုပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သွေးစွန်းထင်းသန့်စင်ရေးအမှုန့် အီး...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Low Temperature Neutralizing Acid...
Excell ဖြင့် လူကြိုက်အများဆုံး Super Softening Powder...
Excellent ဖြင့် Professional Whitening Acid Agent...
Excell ဖြင့် Professional Color Bleaching Powder...
အထူးကောင်းမွန်သော Professional Main Washing Lotion...
ကျွန်ုပ်တို့ကို ON လိုက်ပါ။
လိပ်စာ-အုပ်စု 5၊ Shuangjiang ကျေးရွာ၊ Hexing မြို့၊ Guanghan၊ Deyang City၊ Sichuan၊ PRC 618300
ရနိုင်သောအချိန်-UTC+8 မွန် - စနေ 8:30AM - 6:00PM